မွတ်စလင်များ လိုက်နာ ကျင့်သုံး ရမည့် မုဟမ္မဒ် သခင်၏ သံတမန် စည်းမျဉ်း | Danya Wadi
»General»မွတ်စလင်များ လိုက်နာ ကျင့်သုံး ရမည့် မုဟမ္မဒ် သခင်၏ သံတမန် စည်းမျဉ်း
မွတ်စလင်များ လိုက်နာ ကျင့်သုံး ရမည့် မုဟမ္မဒ် သခင်၏ သံတမန် စည်းမျဉ်း
Posted by danyawadi on December 22, 2016 in General
ယခုသီတင်းပတ်အစောပိုင်းတွင် တူရကီနိုင်ငံ အန်ကာရာမြို့၌ ရုရှားသံအမတ်ကြီးအား သေနတ်သမားက လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခဲ့သည့် မြင်ကွင်း
– တူရကီဆိုင်ရာ ရုရှားသံအမတ်အား လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခြင်းအပေါ် လူအချို့က သြဘာပေးနေကြ၏။ ယင်းလုပ်ရပ် သည် အစ္စလာမ်အား ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သည့်သာသနာအဖြစ် ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်စေပါသည်။ အစ္စလာမ် သာသနာကို မုန်းတီးရွံကြောက်အောင် ပြုလုပ်နေသူများအတွက် မီးထိုးဆီလောင်းပေးရာ လည်း ရောက် ပါသည်။
တစ်စုံတစ်ယောက်မှ အလ္လာဟုအတ်က်ဘရ် (ထာဝရအရှင်သခင်သည်သာလျှင် အကြီးမြတ်ဆုံး) ဟူ၍ဖြစ်စေ၊ အခြားဘာသာရေးစကားစုတစ်မျိုးမျိုးကိုဖြစ်စေ ကြွေးကြော်ဟစ်အော်ခြင်းကအစ္စလာမ့်စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ ဖော်ဆောင်သည့်လုပ်ရပ်ဖြစ်သည်ဟု အဓိပ္ပာယ် မသက်ရောက်နိုင်ပါ။ ယင်းသို့အပြုအမူနှင့်လုပ်ရပ်များကို လက်ခံနိုင်ခြင်း ရှိမရှိဟူသည် ကျမ်းမြတ် ကုရ်အာန်၊ တမန်တော် မုဟမ္မဒ်(ငြိမ်းချမ်းမင်္ဂလာသက်ရောက်ပါစေ)၏ သွန်သင်ဆုံးမချက်များနှင့် ချိန်ထိုးဆုံးဖြတ် ရန် လိုအပ်ပေမည်။
Muhammad Ibn Ishaq said: “Musaylimah would write to Allah’s Messenger.”
Nu’aym Ibn Mas‛ood said: “I heard Allah’s Messenger (salla Allahu ʿalayhi wa-sallam) say to the two emissaries of Musaylimah [the false claimant to prophethood] when he had read the letter of Musaylimah:
So the Prophet Muhammad (salla Allahu ʿalayhi wa-sallam) said:
“By Allah, were it not for the fact that emissaries are not to be killed, I would have struck your necks.”
[Abu Dawood, no. 2761]
မုဟမ္မဒ် အိဗ်နု အစ္စဟာ့က်မှ တင်ပြသည်။ နုအိုင်းမ် အိဗ်နု မတ်စ်အူးဒ်မှ ဆင့်ပြန်ခဲ့သည်။ (တမန်တော်တစ်ပါး အဖြစ် သတ်မှတ်ရန် တောင်းဆိုနေသူ) မုစိုင်းလိမဟ်က အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏တမန်တော်မြတ် (ဆွလ္လလ္လားဟု အလိုင်းဟိ ၀စလ္လမ်)ထံ စာရေးသားပေးပို့ခဲ့၏။ ၎င်း၏ အထူးသံတမန်နှစ်ဦးအား အလ္လာဟ့်စေတမန်တော်ကြီး ရစူလုလ္လာဟ်(ဆွလ္လလ္လားဟုအလိုင်းဟိ ၀စလ္လမ်)က ၎င်းမုစိုင်းလိမဟ်၏စာကို ဖတ်ရှုပြီးနောက် မိန့်တော်မူပါသည်။ “အသင်တို့နှစ်ဦး ဘာကို ပြောကြားဦးမည်နည်း”။ ထိုသူတို့က “မုစိုင်းလိမဟ် ပြောဆိုသည့်အတိုင်းသာ ကျွန်ုပ်တို့ ပြောဆို မည်ဖြစ်သည်” ဟု အဖြေပေးကြ၏။ ဤတွင် တမန်တော် မုဟမ္မဒ်(ဆွလ္လလ္လားဟုအလိုင်းဟိ ၀စလ္လမ်)က ဤသို့ မိန့်တော်မူခဲ့ပေသည် “အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အား တိုင်တည်ပါ၏။ အကယ်၍သာ သံတမန်များကို သတ်ဖြတ်ခွင့် မရှိကြောင်း စည်းမျဉ်းအချက် မရှိခဲ့ပါလျှင် ငါသည် အသင်တို့၏လည်တိုင်များကို ခုတ်ပိုင်းမိ မည်ဖြစ်အံ့”။
(အဗူဒါဝူးဒ်၊ ဟဒီးဆ်တော်အမှတ်စဉ် ၂၇၆၁)
*ဆိုလိုသည်မှာ – မည်မျှပင် မုန်းတီးနာကြည်းလင့်ကစား အစ္စလာမ်သာသနာတွင် ရန်သူ၏သံတမန်များကို သတ်ဖြတ် ခွင့် မရှိကြောင်း သွန်သင်တင်ပြခြင်းဖြစ်သည်*
Abdullah Ibn ‛Amr narrated that Allah’s Messenger (salla Allahu ʿalayhi wa-sallam) said:
“Whoever killsaperson who is granted the agreement of protection by the Muslims shall not smell the fragrance of Paradise though its fragrance can be smelled atadistance of forty years journey.”
[Bukhari, no 6914]
အဗ်ဒုလ္လာဟ် အိဗ်နု အမ်ရ်မှ ဆင့်ပြန်ခဲ့သည်။ ရစူလုလ္လာဟ်(ဆွလ္လလ္လားဟုအလိုင်းဟိ ၀စလ္လမ်) မိန့်ကြားတော်မူခဲ့၏။ “မွတ်စ်လင်မ်တို့၏ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းမှု ခံစားခွင့်ရှိနေသော လူတစ်ဦးကို သတ်ဖြတ်သော မည်သူမဆို သုခဘုံ၏ ရနံ့ကိုပင်လျှင် ရှူရှိုက်ခံစားရမည် မဟုတ်။ ထိုရနံ့မှာ နှစ်ပေါင်းလေးဆယ် ခရီးအကွာအဝေး၌ ရှူရှိုက်ခံစားရ ပါသော်လည်း …. “။
(ဗုခါရီကျမ်း၊ ဟဒိးဆ်တော်အမှတ်စဉ် ၆၉၁၄)
( ‘ရစူလုလ္လာဟ်’ ဆိုသည်မှာ မုဟမ္မဒ်သခင်ကို ရည်ညွှန်းသည်)
သံအမတ်များ၊ နိုင်ငံရပ်ခြားသံတမန်များကို သတ်ဖြတ်ခြင်းအပေါ် အစ္စလာမ်က အကြွင်းမဲ့ တားမြစ်ပိတ်ပင် ထားပါသည်။
သံအဖွဲ့များ၊ သံအမတ်များ၊ သံတမန်များ၊ မွတ်စ်လင်မ်မဟုတ်သူတို့၏ကိုယ်စားလှယ်အစုအဖွဲ့များနှင့် မွတ်စ်လင်မ် နယ်မြေထဲ ၀င်ရောက်လာသည့် နိုင်ငံခြားသားများကို သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ ထိခိုက်နစ်နာအောင် ဒုက္ခပေးခြင်း၊ ပစ်မှတ်ထားခြင်းအမှုများမှာ အထူးတားမြစ်ပိတ်ပင်ချက်တစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း အစ္စလာမ့်ရေးရာပညာရှင်များကလည်း သတ်မှတ်ထားကြပြီးဖြစ်သည်။
အထက်ဖော်ပြပါဖြစ်ရပ်မှ ရှင်းလင်းထင်ရှားစွာ သိစေနိုင်သည့်အချက်အပေါ် စဉ်းစားသုံးသပ်ပါလေ။ သံကိုယ်စား လှယ်နှစ်ဦး သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏စေတမန်တော်စစ်စစ်၏ ရှေ့တော်မှောက်ထံ အရောက်လာ၏။ နှစ်ဦး စလုံး က မုစိုင်းလိမဟ်၏ မုသားအဆိုကို မဆိုင်းမတွ အခိုင်အမာ ပြောဆို၏။ သူတို့၏ခေါင်းဆောင် ကျူးလွန်သည့် မဟာမုသားကြောင့် တမန်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လားဟုအလိုင်းဟိ ၀စလ္လမ်)မှာ အဘယ်မျှအထိ မနှစ်မြို့ခြင်းဖြစ် မည်ကို တွေးကြည့်နိုင်ပါ၏။ သို့ပင်သို့ငြား ကိုယ်တော်မြတ်သည် သံတမန်ကိုယ်စားလှယ်များအား မသတ်ဖြတ်ရ ဟူသည့် အခြေခံစည်းမျဉ်းကို ဆုပ်ကိုင်ကျင့်သုံးပြသတော်မူခဲ့ပေသည်။
လမ်းကြောင်းမှားသို့တွန်းပို့ခံရသည့် လူငယ်အချို့ရှိနေကြောင်း၊ မွတ်စ်လင်မ်နယ်မြေများ၌ အခြေချနေထိုင်နေကြ သည့် မွတ်စ်လင်မ်မဟုတ်သူများကိုသာမက ဧည့်သည်များနှင့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များကိုပါ သတ်ဖြတ်ပိုင်ခွင့် ရှိသည် ဟု ၎င်းတို့မှ ထင်မြင်ယူဆနေကြောင်း ဆော်ဒီအာရေဗျ၏ ဓမ္မသတ်မှူးချုပ်ဟောင်း ရှိုင်းခ် အဗ်ဒုလ် အဇီးဇ် အိဗ်နု ဘာ့ဇ် ကြားသိခဲ့ရသည်။
သို့ဖြင့် သူသည် ခိုင်မာပြတ်သားသည့်အဖြေတစ်ရပ်ကို တုန့်ပြန်ပေးခဲ့သည်။ ယင်းသို့ သတ်ဖြတ်ချင်သည့် အတွေးအခေါ်နှင့် လုပ်ရပ်အပေါင်းမှာ အစ္စလာမ်နှင့် ပြဿားတစ်လမ်းသံတစ်လမ်းဖြစ်ပြီး ဟရာမ် (အပြင်းစား တားမြစ်ချက်) ဖြစ်သည် ဟူ၏။
ထပ်မံ၍မှတ်ချက်ပြုသည်မှာ – ဧည့်သည်များ သို့မဟုတ် အခြေချနေထိုင်သူများမှ အစ္စလာမ်ဆန့်ကျင်ရေးအမှုမျိုး တစ်စုံ တစ်ရာ ကျူးလွန်သည်ကို တွေ့မြင်သည်ရှိသော် မွတ်စ်လင်မ်အာဏာပိုင်များနှင့် မွတ်စ်လင်မ်တရားရုံးများသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားရပေမည်။ အစ္စလာမ့်ခုံရုံး မရှိခဲ့သော် အုပ်ချုပ်သူများထံ ရိုးသားစွာ တင်ပြ၍ ၎င်းတို့အား အကောင်းဖက်သို့ လမ်းညွှန်ပေးရန် တင်ပြရမည်၊ အစ္စလာမ့်ဥပဒေနှင့်အညီ စီရင်နိုင်အောင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ရမည်ဖြစ်သည်။
ကိုယ်ပိုင်ဆန္ဒဖြင့် တရားစီရင်ခြင်း၊ အင်အားနှင့် သတ်ဖြတ်မှုကို အသုံးပြု၍ လူတို့အား ညွှန်ကြားခြင်းနှင့် တားမြစ်ခြင်းတို့မှာ ခွင့်ပြုချက် မရှိချေ။
သို့ဖြစ်ရာ သူတစ်ထူးအဖို့ မွတ်စ်လင်မ်နယ်မြေများရှိ ပြည်သူတို့အကြား အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ဥပဒေသဖြင့် တရားစီရင်နိုင်သည်အထိ နည်းလမ်းရှာလျက် ဒေသတွင်း အုပ်ချုပ်သူများ၊ အာဏာပိုင်များနှင့် ပူးပေါင်း လက်တွဲဆောင်ရွက်ယုံမျှသာ တာဝန်ရှိပေသည်။ ထပ်ဆင့်ရှင်းရပါလျှင် ဖြူစင်သည့် အကြံပြုခြင်းနှင့် ကောင်း မှုဖက်ဦး လှည့်ရန် လမ်းညွှန်ခြင်းမှအပ ပိုပြီး ပြုလုပ်အပ်သည်မဟုတ်ပါ။
ထို့ကြောင့် ထိုသူ့အပေါ် ရှိသည့်တာဝန်မှာ အကောင်းမွန်ဆုံးသောနည်းလမ်းဖြင့် မကောင်းမှုအား တားမြစ်ရန် ဖြစ်သည်။ ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တော်မူသော အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်က မိန့်တော်မူထားပါသည်။ “အသင်တို့ တတ်စွမ်းနိုင် သလောက် သာသနာကိုကိုင်းရှိုင်းကြ၊ တာဝန်ကျေပွန်ကြလော့”။
ဤသို့သောအနေအထားများ၌ အကြမ်းနည်းဖြင့် မကောင်းမှုအား တားမြစ်ခြင်းက ဆိုးရွားသောင်းကျန်းမှုနှင့် အကျင့်ပျက်ယွင်းမှုများထံ ပိုမို တွန်းပို့စေရာရောက်ပါသည်။ ထို့ပြင် ဤကိစ္စများအပေါ် ဆန်းစစ်ကြသူတိုင်း၏ အသိတရားဝယ် အမှားပုံရိပ်များ စွဲထင်ကျန်ရစ်သွားတော့မည်ဖြစ်ပေသည်။ (ကြည့် – မဂ်ျမူးအ် ဖသ်ဝါ အရှ် ရှိုင်းခ် အိဗ်နု ဘာ့ဇ် ကောက်နှုတ်ချက်အကျဉ်း ၈/၂၀၇)
(ဟောင်ကောင် မွတ်စ်လင်မ်ကောင်စီမှ ရေးသားထုတ်ပြန်လိုက်သော Prophet Muhammad (ﷺ) would not have killed foreign delegations even if they were sent by the worst of enemies ကို မင်းထွဋ်ခေါင် က ဆီလျော်အောင် ပြန်ဆိုရေးသားပါသည်။)
← ပါလက်စတိုင်းတွင် အစ္စရေး၏ တရားမ၀င် အိမ်ယာများ လုံးဝ ရပ်တန့်ရေး ကုလ၌ မဲခွဲမည်
ရိုမေးနီးယား ၀န်ကြီးချုပ် အဖြစ် အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် အမျိုးသမီး တစ်ဦး အမည် စာရင်း တင်သွင်း ခံရ →